Izingxenye ze-Y-AHR Slurry Pump
Izingxenye ze-Y-CVX Hydrocyclone
Izingxenye ze-Y-LR Slurry Pump
Izingxenye ze-Y-SPR Slurry Pump
AH Slurry futha iraba impeller
Slurry futha iraba liner
SPR slurry Pump bezinhlamvu
I-Rubber Slurry Pump Body (Casing) engashintshaniswa nochungechunge lweWarman SPR Rubber Vertical Slurry Pumps Sinikeza izinhlobonhlobo zezikebhe zenjoloba, Ukuze amakhasimende akwazi ukufaka ezindaweni ezahlukahlukene eziyinkimbinkimbi. Uhlobo Lwezinto Zenjoloba ze-YAAO® Nezincazelo Zedatha I-YAAO Code Igama legama lohlobo lwencazelo YR26 Anti Thermal Breakdown Rubber Natural Rubber YR26 irabha yemvelo emnyama, ethambile. It has ephakeme ukuguguleka ukumelana zonke ezinye izinto in emihle kuyizinhlayiyana slurry izicelo. I-antiox ...
Ikholomu ye-SPR Slurry Pump
* Sinikeza amakholomu osayizi abahlukahlukene ukuqinisekisa ukuthi ungawasebenzisa kunoma yikuphi ukujula komhlaba * Inqubo eyingqayizivele yerabha yokunamathela ukuhlangabezana nazo zonke izinhlobo zemidiya ene-acid-base * I-flange yekhwalithi ephezulu, imbobo ejwayelekile yesikulufa, ukufakwa okulula nokusheshayo kwe-SPR Vertical Slurry Pumps Ishadi lesakhiwo * I-SPR Slurry Pumps Column data Model Model Back Liner code Rubber material Length (MM) 40PV-SPR PVR4102 * R26, R55, R33, S01, S10, S12, S31, S42 600.900.1200.1500.1800.1800 65QV-SPR QVR65102 * R26, R55, R33, S ...
Iphampu ye-SPR Slurry impeller evulekile
-Impephelezi inezindima ezinkulu futhi ezivulekile futhi ingadlulisa i-slurry ngempumelelo, inikeze ibhalansi enhle enamandla ne-static ukufeza ukudlidliza okuncane nomsindo ophansi osebenzayo. -I-impeller yohlobo oluvulekile ikhombisa ukusebenza kahle okuphezulu futhi ayijwayele ukugqoka esifundeni se-liner sangaphambili. Ukukhiqiza okuphezulu, ukukhuphuka kwenzuzo kanye nokugcinwa kwesondlo -Izifakeli zokumunca eziphindwe kabili zakha imithwalo ethwele i-axial ephansi, ikhuphula impilo * ye-SPR Rubber Lined Vertical Slurry Pumps Impeller ...
SPR slurry Pump uketshezi Pipe
* Sinikela ngokukhipha ipayipi losayizi ohlukahlukene ukuqinisekisa ukuthi ungawasebenzisa kunoma yikuphi ukujula kwangaphansi komhlaba * Ikhwalithi ephezulu ye-flange, imbobo ejwayelekile yesikulufa, ukufakwa okulula kakhudlwana nokusheshayo * Inqubo yerabha yokunamathela eyingqayizivele ukuhlangabezana nazo zonke izinhlobo ze-asidi-base media Type SP \_ Amapompo e-SP (R) amile mpo, ama-centrifugal slurry pump afakwa ngaphakathi kwesump ukuze asebenze. Zenzelwe ukuletha ama-slurries amakhulu, amakhulu nezinhlayiya eziphakeme. La mapampu awadingi noma iyiphi ishaft seal namanzi okuvala. Bangakwazi ...
I-SPR Slurry Pump Rubber Emuva Kwelineni
Izici zempompo ye-slurry mpo ye-SPR: 1) Ukusebenza okuphezulu Okungavimbeli Indawo eyakhiwe ngokukhethekile eyodwa, isango eliphindwe kabili, imodeli yokuvula, impeller yemodeli yeqabunga ephindwe kabili isebenza kahle ngaphandle kokuvinjwa, ikhafa yepompo njll. ukuqeda nge-impeller kungakhethwa ngezinto zabo kanye namamodeli kwabezindaba abathuthwayo futhi kungaqinisekiswa ngokusebenza okuhle kakhulu kwe-hydraulic nempilo yokusebenza ekuthuthweni kwemithombo yezindaba equkethe okusanhlamvu okumisiwe ...
L-Uhlobo Slurry Pump impeller
Izingxenye ezimanzi zenjoloba ukumelana nokugqoka okuhle nokumelana nokugqwala, okuvame ukusetshenziselwa izimo zokusebenza ze-asidi. Njengokudonsa embonini yezimayini, i-slurry enezinhlayiya ezincane futhi ayikho imiphetho emibi. Yonke ingxenye yokuhamba ifaka i-Cover Plate Liner, i-Throat bushing, i-Frame plate liner, i-Frame Plate Liner Insert. Izinto zenjoloba esizisebenzisile sinokumelana okuphezulu kuzo zonke ezinye izinto kuzinhlelo zokusebenza ezinhle zezinhlayiya. Ama-antioxidants nama-anti degradents asetshenziswe ezintweni zethu kube ...
L-Uhlobo slurry Pump Uzimele Plate Liner
Izindwangu zenjoloba yempuphu ye-slurry ziyizingxenye ezimanzi emaphampu e-slurry emigqa yerabha eqondisa ama-slurries endaweni yokupompa. Amaphampu amaningi wenjoloba agqinsiwe asebenzisa imigwaqo yenjoloba ehlukanisiwe, eyodwa iyi-liner plate plate, kanti enye i-cover plate liner, lesi sakhiwo senzelwe ukwenza ukubuyisela kube lula. Izinsimbi zethu zenjoloba yempuphu evamise ukwenziwa zivame ukwenziwa nge-premium yerabha engokwemvelo engu-R55 enikeza izikhathi eziyisi-1.5 zokuphila kwensizakalo yenjoloba ejwayelekile engu-R26. * L-Type Slurry Pumps impeller Data Model Impeller code ...
L-Uhlobo oluludaka Pump Cover Plate Liner
Izingxenye zethu ze-hydrocyclones ziyashintshana ngo-100% nemikhiqizo edumile emhlabeni. Kusetshenziswa irabha yekhwalithi ephezulu engu-R55 i-YAAO izibophezele ekwenzeni kahle ekusebenzeni kwamakhasimende nokwaneliseka. Sinikeza izinketho zamakhasimende ethu nangama-linings wethu wokugqoka we-hydrocyclone, sihlose ukunciphisa isikhathi sakho nezindleko nokuthola ukusebenza okungaguquguquki kwama-hydrocyclones akho. Izici Nezinzuzo i-YAAO Hydrocyclone Liner ifakazele ukuthi ikhwalithi ephezulu nokusebenza kwayo kwezindleko ngokusetshenziswa kwensimu kwamakhasimende ethu worldw ...
Umkhiqizo isingeniso oluludaka futha impeller angadlala indima ebaluleke kakhulu ekusebenzeni slurry futha. Ngokuzungezisa, kungasiza slurry futha ukuhlangabezana nezidingo zemishini. I-slurry pump impeller kulula ukuba igugwe, ngakho-ke sifuna izinto ezikhethekile zokwelula isikhathi sempilo yempepho. Kusetshenziswa impompo zenjoloba yenjoloba ukubhekana nesilayidi esonakalisayo ngezinhlayiya ezibuthuntu. Zenziwe ngenjoloba yemvelo, injoloba yokwenziwa, i-EPDM Rubber, iNitrile Rubber, noma enye into njenge ...
Izingxenye ezimanzi zenjoloba ukumelana nokugqoka okuhle nokumelana nokugqwala, okuvame ukusetshenziselwa izimo zokusebenza ze-asidi. Njengokudonsa embonini yezimayini, i-slurry enezinhlayiya ezincane futhi ayikho imiphetho emibi. Yonke ingxenye yokuhamba ifaka i-Cover Plate Liner, i-Throat bushing, i-Frame plate liner, i-Frame Plate Liner Insert. Izinto zenjoloba esizisebenzisile sinokumelana okuphezulu kuzo zonke ezinye izinto kuzinhlelo zokusebenza ezinhle zezinhlayiya. Ama-antioxidants nama-anti degradents asetshenziswe ezintweni zethu anezinyosi ...
I-Slurry Pump Expeller Ring isetshenziselwa amaphampu we-AH / HH / L / M, indandatho yokuxosha isebenza ngokubambisana ne-expeller yamaphampu we-slurry. Abakwazi ukusiza kuphela ukuvala iphampu, kodwa futhi banciphise amandla we-centrifugal. Idizayini kanye nempahla yokuxosha kubalulekile empilweni yayo yesevisi Lesi sigxivizo silungele iningi lezinsimbi zokumpompa. Inikeza inzuzo enkulu yokuthi akudingeki amanzi endlala. Umthengisi osebenzisa iringi yento efanayo futhi esebenza namaveni ngemuva f ...
Ikheli: XIHAOKE INDUSTRY ZONE, SHENZHOU CITY, HENGSHUI, HEBEI. ECHINA
Slurry Pump Izinto Ukukhethwa
Epomulweni elicwengekileyo impeller kanye nangaphakathi ...
Slurry Pump Impeller Gqoka Izingxenye
I-impeller iyi-Rotor, ingxenye ejikelezayo o ...
Pump Rubber Front Liner Gqoka Izingxenye
Uma ushaya ama-slurries ahlaselayo akuyona ...
* I-YAAO wuphawu lokuhweba olubhalisiwe futhi ayimele noma ayihlangani nganoma iyiphi indlela neWarman of Weir Minerals Group. Onke amagama, izinombolo, izimpawu nezincazelo kusetshenziselwa inkomba kuphela futhi akusho ukuthi noma yimaphi amaphampu noma izingxenye ezifakwe kuhlu zingumkhiqizo wamaWarman Pumps.